Al Shabaab oo qoysas badan ku khasabtay inay guryahoodu isaga barakacaan | sowora
← Theresa May’s new FGM reporting rules ‘will stop families seeking help’
A nonprofit aimed at Somali women pushes for empowerment, education →
Al Shabaab oo qoysas badan ku khasabtay inay guryahoodu isaga barakacaan
Posted on January 21, 2015	by sowora
Xoogaga Ururka Al Shabaab, ayaa waxay qoysas fara badan ku khasbeen inay guryahoodu isaga barakacaan, ka dib markii ay go’doomiyeen wadooyinka gala goobaha ay ku nool yihiin.
Shacabka ku dhaqan Degmooyinka Waajid, Xudur iyo Tiyeeglow, ayaa waxay isaga barakacayaan guryahooda, sababo ku aadan Shabaabka oo weli go’doomin xoogan ku haaya Degmooyinkaasi.
Shacabka, ayaa waxaa la soo deristay macluul ka dhalatay gaadiidkii ganacsiga, oo ay Shabaabku u diideen inay gudaha u galaan Degmooyinkaasi. Waxayna taasi sababtay in dadku la soo gudboonaato sicir barar aynaan taag u hayn.
Ganacsatada ku sugan Degmooyinka la go’doomiyay, ayaa waxay sare u qaadeen qiimihii caadiga ahaa ee raashiinka la kala siisan jiray, ka hor intii aynaan Shabaabku go’doomin. Ganacsatada ayaa iibinaaya raashiinkii ay keydka u heysteen.
Maxamed Cabdi Tool, Gudoomiyaha Gobolka Bakool waxa uu sheegay in shacabku ay la soo deristay dhibaato muuqato, isla-markaana ay bilaabeen inay guryahoodu isaga cararaan.
Tool oo la hadlay Idaacada Mustaqbal ee Magaalada Muqdisho, ayaa ku waramaaya in Dowladda Somaliya looga baahnaa inay go’doominta ka saarto Degmooyinkaasi, haddii ay iyagu xoreeyeen Degmooyinkaasi, sida uu yiri.
Waxaa fashilmay dadaalo lagu doonaayay in Shabaabka looga saaro wadooyinka soo gala Degmooyinka Gobolka Bakool ka tirsan, ee ay sida adag u go’doomiyeen.
Shabaabka, ayaa waxaa lagu eedeeyay in ujeedadoodu tahay in la waayo dad ay maamusho Dowladda, oo ku nool Degmooyinkii laga fara maroojiyay sanadkii tagey.